Umsindo Lounge wethula Isevisi yePodcast | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Umsindo Lounge wethula Isevisi yePodcast
Umsindo Lounge wethula Isevisi yePodcast
I-New YORK — i-Sound Lounge, isikhungo esizimele esikhulu kunazo zonke somsindo ozimele eNew York, sewethule iphakethe elisha lemikhiqizo yokukhiqiza umsindo nezinsizakalo zokukhiqiza ngemuva kwama-podcasts. Inkampani inikezela ngokuqoshwa kwe-studio, ukuqoshwa okukude, ukuhlelwa komsindo, ukwakhiwa komsindo nokuxuba. Lesi situdiyo singasiza nangamalayisense omculo, ukusakaza ngezwi kanye nezinye izidingo zokukhiqiza. Inhloso yabo ukuletha ubuqambi obufanayo nobuchwepheshe obuhle obusetshenziswa kwezentengiso, kwithelevishini nefilimu, kumaphakathi akhula ngokushesha ama-podcasts.
Izinkampani ezinkulu zemidiya ezitshala imali kakhulu kuma-podcasts, okuphakathi kuthola masinyane inani lokuncipha kanye nokukhiqiza elidinga izinsizakalo zomsindo ezisezingeni eliphakeme. "Ama-podcasts aseba ngumsakazo omusha," kusho umsunguli we-Sound Lounge nomqambi wezwi lomsindo uMashall Grupp. "Sinikeza abakhiqizi ithalente nezinsizakusebenza ukuthi bathathe ama-podcasts abo kusuka kusikripthi ukuze basabalalise futhi balethe umkhiqizo osezingeni eliphakeme abalidingayo ukufinyelela izethameli eziningi."
I-Sound Lounge isivele iyingxenye yama-podcasts ambalwa athandwayo. Inikeze izinsizakalo zokuqoshwa kwe I-Players 'Tribune, uchungechunge lwe-podcast oluvela enkampanini eyasungulwa ngowayengumbhali weNew York Yankee omkhulu uDerek Jeter, futhi Kungukukhangisa okuyi-Fucking kuphela (IOFA), i-podcast ene-themed yokukhangisa ephethwe ngu-Rethink's Managing Partner Aaron Starkman. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa i-Sound Lounge Yonke indawo, ukusebenzisana kwale nkampani ne-Harbarbar ne-Sweet Rickey eBoston, babe yingxenye ebalulekile ye-podcast yaseMassachusetts General Hospital, Ishajiwe, ukuhlinzeka ngokusatshalaliswa kwe-VO yezinsizakalo, indalo ye-mnemonic, ukwakhiwa komsindo, ukuhlela izingxoxo kanye nezinsizakalo zokuxuba.
Iningi lezinsizakalo ezihlinzekwa yi-Sound Lounge kwezentengiso zethelevishini nezomsakazo zisebenza ngqo ekukhiqizeni i-podcast. Inikeza nezinsizakalo ezikhethekile ezihambisana nendawo. Lokhu kufaka ukufomatha kwesiqephu, ukuqondiswa kwethalente, nomculo owenziwe ngokwezifiso nokwakhiwa komsindo. Inikeza nge-state-of-the-art gear kufaka phakathi izigaba zokuxubana eziningi ezifakwe Avid I-ICON yokuxuba i-consoles, izinhlelo zakamuva zokuhlela zamathuluzi we-Pro kanye nemigqa yedatha yejubane eliphezulu ongayixhuma kunoma yisiphi isitudiyo emhlabeni. Izinsizakusebenza zayo zifaka nesigaba se-ADR, umtapo wolwazi omkhulu wemisindo namakhono weFoley.
"Sifaka yonke imisindo," kusho umkhiqizi omkhulu uBecca Falborn. "Futhi, sinabasebenzi abahleli, abaqambi bemisindo nabahlanganisi abanolwazi lokuphamba kwezentengiselwano zakwaSuper Bowl, abashaya izinhlelo zethelevishini namabhayisikobho."
U-Falazy unezela ukuthi i-Sound Lounge ayilethi ubuchwepheshe kuphela kepha intshiseko nakwabaphakathi, ephawula ukuthi amalungu amaningana abasebenzi bes studio abakhiqiza ama-podcasts abo, kubandakanya nalowo abizwa ngawo, u-You'rExcused. “Siyayiqonda inqubo nezinselelo abakhiqizi ababhekana nazo ekubhaleni okuqukethwe, ukuhlela izivakashi nokuletha imibukiso emakethe,” kusho yena. "Uma ungaphansi kwesibhamu, kusiza ukusebenzisana nabantu abaqondayo nabazinikele ukusiza ekufezekiseni izinhloso zakho."
I-Sound Lounge iyisakhiwo sokuthunyelwa komsindo ngemuva kokuhlinzeka ngezinsizakalo zezokukhangisa ze-TV nezomsakazo, amafilimu avela, uchungechunge lwethelevishini, imikhankaso yedijithali, imidlalo kanye namanye amavidyo akhulayo. Isekelwe e-Manhattan, i-Sound Lounge iphethwe ngumculi futhi iqhutshwa. Landela njalo Facebook, Twitter, LinkedIn futhi Instagram Noma vakashela www.soundlounge.com izindaba zakamuva ze-Sound Lounge.
URebecca Eskreis 'What What Break the Ice "to Premiere at Woodstock Film Festival - Septemba 21, 2020
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Avid Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida I-Cobalt Encoder Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor podcasts SJGolden - kuzwakale Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum 2019-11-25
Ngaphambilini: USam Daley waseDeluxe waseNew York Uletha Ukwehluka Okugqamile ku “Usuku Oluhle Omakhelwane”
Olandelayo: Kwethulwa: I-Red Giant Qedela Abantu Abodwa, Abafundi Nabafundisi, Ukubhaliswa Kwonyaka Kokufinyelela Konke Ekuhlelweni, Kwimifanekiso Ye-Motion kanye Namathuluzi e-VFX